Заб 137 CARST - Nnwom 137 NA-TWI | Biblica América Latina
Заб 137 CARST - Nnwom 137 NA-TWI
1Yɛtenaa Babilon nsubɔnten ho. Ɛhɔ na yesui bere a yɛkaee Sion no. 2 Yɛde yɛn asanku sensɛn nnua a ɛbemmɛn hɔ so. 3 Wɔn a wɔkyeree yɛn dommum no ka kyerɛɛ yɛn se, yɛnto nnwom mfa nnye wɔn ani. “Monto Sion ho dwom.” 4 Ɛbɛyɛ dɛn na yɛatumi ato dwom ama Awurade wɔ ananafo asase so? 5 Sɛ me werɛ fi wo Yerusalem a, ɛnsɛ sɛ mitumi bɔ sanku no bio! 6 Sɛ mekae wo na mannwene wo ho sɛ m’ahosɛpɛw a, ɛnsɛ sɛ mitumi to dwom bio.
7 Awurade, kae nea Edomfo yɛe da a wɔfaa Yerusalem dommum no. Kae nea wɔka tii mu no se, “Bubu no gu fam!” no. 8 Babilon, wɔbɛsɛe wo. Nhyira nka nea obetua mo nea moyɛ yɛn no so ka; 9 nea ɔfaa mo nkokoaa na ɔpɛtɛw wɔn ɔbotan so no.
NA-TWI : Nnwom 137